Izingxenyekazi zekhompuyutha, isoftware ... iWebhu? | Martech Zone
Ekuguqukeni komkhakha wamakhompiyutha, sinakho Hardware - okokusebenza okudingekayo ukuqhuba izinhlelo zokusebenza. Futhi besinakho Software, izixazululo ezisebenzise lezo zinsizakusebenza ukwenza umsebenzi esingathenga futhi siwufake kwimidiya ehlukile. Kulezi zinsuku, ungalanda isoftware ngaphandle kwemidiya.
Iminyaka engamashumi amabili ye-Hardware ne-Software
I-Hardware inokuthuthuka nokufaka okunye esikhundleni sayo. Ngilahlekelwe ngokwethembeka wonke amakhompyutha engibe nawo kuze kube manje. Nginezinsalela zamathambo ezingekho ngaphansi kuka-5 kanye ne-laptop eyodwa efile ekhaya lami.
Isoftware inokufakwa nokuthuthuka okufaka izinguquko kuhlelo lokusebenza lwesoftware. Luhlelo lwakudala esisasebenza futhi esilwa nalo nanamuhla. Ngibe nokuvuselelwa kwesoftware ekuqaleni kwanamuhla obekudinga ukuthi ngivale bese ngiqala kabusha iMacBookPro yami. Angikaze ngibe nokuvuselelwa kwe-OSX okungahambi kahle, kepha isikhathi ngasinye angikwazi ukuzibamba ngiqonde kancane - ngicabanga ukuthi okubi kakhulu kuzokwenzeka futhi ngizolahlekelwa yiwo wonke umsebenzi wami. Ngine-drive yenethiwekhi lapho ngigcina khona izinhlelo zami zokusebenza ezilandiwe kanye ne-CD binder lapho ngigcina khona konke okunye (futhi njalo ngikuthole kungekho).
Isoftware efana ne-Google Spreadsheet, i-Google Analytics, i-Gmail, i-ExactTarget, kanye nethoni yezinye zihamba 'ngezinhlelo zokusebenza ezisuselwa kuwebhu' noma 'ngezinhlelo zokusebenza ezenzelwe isiphequluli' noma siphonsa igama elifingqiwe, SaaS. Isichazamazwi esibi futhi ichaza uhlobo lwebhizinisi olungaphezu kohlobo 'lwe-ware' oluyilo. Futhi, izinhlelo eziningi ze-SaaS zisenokuthuthuka noma ukukhishwa okukhulu. Azidingi ukufakwa noma ukuqala kabusha, kepha azitholakali ngezikhathi ezithile.
Igama eliphelele lezinhlelo zokusebenza zanamuhla kungenzeka kube yi-Netware, kepha kubukeka sengathi I-Novell unalo lelo gama lokuhweba. I-Webware ingahle isebenze, kepha kubukeka sengathi C | Net usebenzisa lokho. Kubukeka sengathi i-browserware kungenzeka ibe yinto engenzeka - kepha iyisilabhili esingeziwe.
Kungani ungasebenzisi iWebhuware?
Iqiniso ukuthi iWebhuware (angibonanga uphawu lokuhweba) ukuvela okulandelayo kwezinhlelo zethu zokusebenza. Namuhla, asikho isidingo sokuthi izinhlelo zokusebenza ziyeke ukusebenza. Sinamakhasi angamakhulu kuhlelo lwethu lokusebenza emsebenzini futhi singakwazi ukuvula amakhasi amasha ngaphandle kokuthatha phansi amadala. Nginesiqiniseko sokuthi intuthuko encane ingenzeka futhi lapho abasebenzisi bangaguquka khona phakathi kwezinhlelo ezindala nezintsha.
Imininingwane ingaphindaphindeka endizeni, noma amatafula amasha esikhashana angakhiwa ukwengeza ushintsho. Impela, kungumsebenzi owengeziwe, kepha iphuzu lami ukuthi kungenzeka. Akusadingeki ukuthi siphazamise amakhasimende ethu.
Anginayo i-floppy drive esebenzayo ekhaya lami. Ngijwayele ukusebenzisa iCD / DVD yami, noma. Cishe konke engikwenzayo manje kususelwa kuwebhu. Lapho ngilanda futhi ngifaka isoftware, imvamisa ngigcina ikhophi kufayela lami le- Inyathi Tech ukushayela kwenethiwekhi.
Ngisho nakwebhizinisi, akudingekile. Lapho ngiqala Encane i-Indiana kuPat Coyle, asihambanga nomsingathi. Isicelo sakhiwe futhi sabanjwa nge Ning. Sinazo zonke izilungiselelo zesizinda ezikhomba kuzo Izinhlelo zokusebenza ze-Google lapho singasebenzisa khona i-imeyili kanye neGoogle Docs. Ayikho i-hardware, ayikho isoftware… kepha i-webware.
Kungani singayibizi iWebhu?
Tags: hardwareisofthiweisoftware njengensizakaloizinhlelo zokusebenza zewebhuizinhlelo zokusebenza zewebhuamapulatifomu ewebhuamapulatifomu asuselwa kuwebhui-webware
Jan 16, 2008 ngo-11: 38 PM
Yigama elihle lelo.
Igama lesizinda selithathiwe vele
Angazi kepha kungahle kube njalo
Jan 17, 2008 ku-2: 52 AM
Ngiyayithanda. Kepha awuzibi yini i- “middleware” eyayizoxazulula zonke izinkinga zethu eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye. Ngithanda i-webware. Kuyathakazelisa ukuthi alukho uphawu lokuhweba. I-URL edabukisayo isithathiwe njengakho konke okunye.
Jan 17, 2008 ku-10: 07 AM
Ngizithanda ngempela zonke izinhlelo zokusebenza ezisuselwa kuwebhu eziqhubeka nokuvela futhi zengezwe kuthuluzi lami lamathuluzi. Ngisebenzisa iGoogle Docs njengokusangana futhi kumuntu osebenzisa amakhompyutha ahlukene angama-3-4 ngosuku olulodwa, kuyisindisa impilo.
Kodwa-ke, ngaso sonke isikhathi lapho ngiqala ukusebenzisa insiza entsha esekwe kuwebhu, kuhlale kunaleli zwi elincane ngemuva kwekhanda lami elizulazula ngasikhathi sinye. Lokho ngukuthi lapho ngilahlekelwa ukuxhumana kwami ​​kwe-inthanethi, ngilahlekelwa ukufinyelela kuwo wonke ama-Google Amadokhumenti ami, i-database yami yama-invoyisi amaklayenti, i-imeyili yami, i-IM yami, izithombe zami ezingenakubalwa kuFlickr, njll. Njll.
Lokhu kushintshela kwi-webware kusenza ukuthi sibeke amaqanda ethu amaningi ngokwengeziwe kubhasikidi owodwa. Bese sibopha intambo ende kulelo bhasikidi bese siyiphonsa esikhaleni. Inqobo nje uma intambo ixhunyiwe, konke kumnandi. Kepha lapho leyo ntambo inyamalala, nami ngingahle ngibe namandla, futhi.
Ngicabanga ukuthi engikushoyo lapha ukuthi ukuze i-Webware isuke ngempela, sidinga ukufinyelela okuthembekile, okugcwele, nokungafuneki ku-inthanethi. Futhi ukuba nesiphequluli sewebhu efonini yakho akufani. Impela, ngingaxhuma ilaptop yami kufoni yami ephathekayo ye-verizon kanye ne-surf, kepha uma ngidlula umkhawulokudonsa othize noma umkhawulo wokulanda ngenyanga eyodwa, ngiyasuswa. Angiludingi lolo hlobo lokucindezeleka.
Jan 17, 2008 ngo-5: 04 PM
Kuyahlekisa kufanele ukusho lokhu. Bengivele ngitshela iklayenti izolo ukuthi iningi lesoftware engiyisebenzisayo likhona kuphela kwi-Intanethi njengezinhlelo zokusebenza zewebhu. Manje sengiyazi ukuthi ngithini le nto… i-webware!
Jan 18, 2008 ku-7: 29 AM
Kade ngangisho into efanayo isikhathi eside… Ngihlale ngibhekisa kuzinhlelo zokusebenza ze-CMS / Online njenge-webware vele… Ngiyamangala ukuthi asizwa lutho ngayo.
UJohn Raul Joven II
Jan 18, 2008 ku-9: 39 AM
I-Webware izwakala kahle. Maduze, zonke izinkampani ezinkulu zamakhompyutha / ze-IT zizoshayisana ngemikhiqizo yazo kwiWebhu. Lo mkhuba futhi nokho uqala ukwenzeka ngokufika kwesoftware ethambekele kuwebhu.